Ukutshata kwintsapho yakhe Isahluko se-169 NovelCat Version | XperimentalHamid
Ukutshata kwiintsapho zakhe Isahluko 169 NovelCat Version
Ngamana 30, 2020 by Hamid Ali
Funda iSahluko se-169 seNoveli Ukutshata kwintsapho yakhe yeNovelCat. Bhalisa kwibhlog yethu ukuze ufumane umxholo omangalisayo kunye nohlaziyo lwexesha elizayo.
Siza kuqhubeka sithumela zombini iinguqulelo ze-NovelCat kunye ne-non-NovelCat ukulungiselela umfundi.
Nceda usilandele kwaye uncede ukufikelela kubantu abaninzi
Joyina iChannel yethu ye-YouTube esemthethweni Nceda
Isahluko se-169: Ukutshata kwintsapho yakhe iNovelCat Version
Sincede ekuziseleni umxholo omangalisayo
Emva kokonyuka nokuhla okumbalwa, uHenry wehla entabeni kwaye wabuyela kwindawo enyukayo.
Indlela wonke umntu amjonga ngayo uHenry itshintshile. Babengasamjonganga phantsi. Abanye abantu ababenolwalamano oluhle noHan babonisa nombulelo emehlweni abo. Baqonda ukuba, ukuba uHenry wayengakhange athabathe inyathelo ngequbuliso, ngekhe uHan ebefile.
UHenry wabetha uthuli kwiisuti zakhe kwaye waya eSylvia ngesantya esiphezulu. Ufake irosisi awayesandula ukuyifaka entlokweni kaSylvia.
“Ke chizi.” USylvia wakrokra kwaye waqhala amehlo, kodwa makhe uHenry afake le nto inyuke kwizinwele zakhe.
“Le Yentyatyambo Yokungafi!” Umntu othile waqonda irosa. “Ikhula eweni elikufuphi encotsheni yentaba! Ukhuphe nje ngokulula! ”
"Ubukhe waya encotsheni yentaba?"
“Ayinakwenzeka loo nto, andithi?”
"Angakhwela njani encotsheni yentaba ngezandla ngexesha elifutshane kangaka?"
Abanye abantu abathanda ukunyuka intaba babenoluhlobo lwenkangeleko entle emehlweni abo. Ebumnyameni, angathini ukufikelela encotsheni yentaba ngexesha elifutshane kangaka engenazandla kwaye engenazixhobo zokhuseleko? Ayinakukholwa!
Kodwa akunandaba nokuba bayakholelwa okanye abayikholelwa, intyatyambo ye-ukungafi yayilubungqina.
Ngeli xesha, uHan wayesele efikile ngokukhuselekileyo. Ukuthetha kwakhe kwakunzima kakhulu, kwaye wayengasenekratshi njengangaphambili. Abanye abantu beza bezomthuthuzela, kodwa yena wabatyhalela kuye, wahamba ke waya kuHenry.
"Ndiphulukene. Unamandla kakhulu. Amandla akho angaphaya kokucinga. Ngapha koko, enkosi ngokusindisa ubomi bam. ”
Wancuma uHenry. Ngaphandle kokuthetha, uthathe inyathelo lokuqala lokufikelela kuye ngesandla sokunene.
UHana ubothuswe imizuzwana emibini. Uye wasolula isandla sakhe sasekunene esine grin.
Ukubona lo mbono, ubuso bukaNick babubi ngakumbi.
Ngokwenyani wayengalindelanga ukuba lo nyana, owayehlala njengonyana-umkhwenyana, wayenobuchule obunamandla obunje. Waye waqumba kwaye ecinga malunga nendlela yokujongana noHenry. Kodwa uHenry waya kuNick kuqala.
“Master Ning, kunjani kuwe? Lithuba lakho, akunjalo? ”
“Ngaba nguwe othabatha inyathelo lokundicaphukisa?” UNick waphakamisa amashiya akhe, kwaye kwabakho umsindo ongachazekiyo kwilizwi lakhe.
Ngaba ayicacanga ngokwaneleyo? ” UHenry wabuza, "Nick Ning, ndixelele, ufuna ukudlala ntoni?"
“Kulungile, kuba ufuna ukudlala, ndingene.” UNick wahleka ngokufihlakeleyo. “Ukubaleka? Uyangena?"
"Kuhle ngam." UHenry wabonisa inkangeleko yokungakhathali.
Kule klabhu, bekukho umkhondo obude obuziikhilomitha ezingama-21 ubude uneejika ezininzi ezibukhali. Kule track, eyona rekhodi yayiyimizuzu eli-10 imizuzwana eli-7. Kwathethwa ukuba irekhodwe yingcali yobuhlanga. Uye wathi ukuba ibingeyiyo inguqu ekhethekileyo yemoto ye-F1, akukho mntu unokuyigqiba le track phantsi kwemizuzu eli-10.
Ngamava okunyuka kwamatye, amagqabantshintshi abantu ebengekho kwelinye kolu khuphiswano lomdyarho. Ewe kunjalo, babebaninzi abantu ababethanda uNick ukuba aphumelele, kuba akunamsebenzi ekuqondeni okanye ukuncoma, inzuzo yakhe yayinkulu kakhulu kunaleyo yomkhwenyana wosapho lakwaLin.
Okokuqala, imvelaphi yosapho lukaNick yamnika amathuba angakumbi okunxibelelana neemoto zodidi. Le yayiyinto uHenry awayengenakuyithelekisa nayo.
Okwesibini, izakhono zokuqhuba zikaNick zazisaziwa kwisangqa sonke sePhondo laseNing. Malunga noHenry? Ukuba wayenobuchule bokuqhuba, ngekhe abe ngumkhwenyana ka-matrilocal.
Okwesithathu, iimoto yayizizinto eziphambili zokuphumelela ugqatso.
Kule klabhu, uNick wayeneemoto ezintathu zomdyarho ezinokulungiswa kakuhle, kwaye ukusebenza kwazo kwakubalasele.
Ukuba ezi meko zintathu bezihlanganisene, bambalwa abantu abanokucinga ukuba uHenry angaphumelela.
Kwakukho izihlalo ezikhethekileyo kubabukeli kuloo track, kwaye abantu babelwa ngokukhethekileyo ukuba baxele imeko yenkundla nganye kwizikhululo zendlela.
Ngexesha lokuzilungiselela, uHan uthathe inyathelo lokuqala ukubonisa ububele bakhe kuHenry wathi, “Buddy, imoto kaNick iguqulwe ngokukodwa ukufikelela kwisantya seekhilomitha ezili-100 kwimizuzwana eyi-1.8. Isisu semoto sicinezelwe phantsi, kwaye umkhondo wemoto uyahlangabezana nemigangatho yalo mzila. Nokuba ungumqhubi wemoto oqeqeshiweyo, ukuba awuyilungiselelanga imoto elungileyo, ngekhe ubethe imoto kaNick. Ndingakuboleka imoto yam. ”
UHenry wancuma wathi, “Enkosi, kodwa hayi, ndiza kuqhuba imoto yomfazi wam.”
"Imoto yam?" USylvia akazange abuyele emhlabeni. Kwakungekho ukuba wayengafuni ukuboleka imoto kuHenry, kodwa kwakunzima ukubetha imoto kaNick kunye neMercedes yakhe.
Ngokukhawuleza nje ukuba kubonakale i-GTR yesilivere emhlophe, kwabakho ukugqabhuka kwemikhwazo nokukhala. UNick wayehleli esihlalweni somqhubi kwaye wajonga uHenry ngokungakhathali.
UHenry uthathe isitshixo seMercedes-Benz ukusuka eSylvia kwaye wabalekela kwindawo yokupaka. Kungekudala, kungena iMercedes-Benz ebomvu evuthayo. Inqwelo-mafutha yayixabisa isigidi esinye namakhulu asithoba e-RMB kwaye yayine-4.0 T twin turbocharging. Kodwa ngeli xesha, kwakubonakala ngathi buthathaka ngaphambili phambi kwe-GTR.
Ayisiwo amandla enjini awayeguqulwe kwi-GTR, kodwa kunye nokuzinza kwemoto, kunye neebhuleki, ezazigqume ngokupheleleyo iMercedes Benz.
Xa i-Mercedes-Benz Henry yaqhuba kwaye i-Nick's GTR yema kwindawo efanayo yokuqala, akukho mntu wacinga kakhulu ngoHenry kwakhona. Abanye abantu bebesacinga ukuba mhlawumbi umkhwenyana wosapho lakwaLin unezakhono ezithile. Kodwa ngoku, nokuba ebenezakhono ezithile, ukhutshelwe ngaphandle ngokupheleleyo zizixhobo zekhompyutha.
Umsantsa phakathi kwezithuthi zemidlalo kunye neenqwelo zokugibela wawubanzi ngathi yintlambo ebalekayo.
“Sylvia, ukuba iqhubeka ngoluhlobo, umyeni wakho uyakulahleka nakanjani!” U-Yan uxhalabile ecaleni kwakhe, “Kuyaqala umyeni wakho ukuza apha. Nokuba angabaleka na, uya kuziva ekude kakhulu kulo mzila kuba akazange azame. Kodwa uNick wahlukile. Ubaleke lo mzila kumakhulu amaxesha. Uyakwazi ukucengceleza onke amagophe, engathethi ngomgama ophakathi kweemoto. ”
"Ndiyavuma." U-Han ukwathe, “UHenry unawo amandla, kodwa kolu khuphiswano, akuncedi nto ukuba namandla omzimba kuphela, kodwa nezixhobo ezifanelekileyo. Namhlanje, nokuba abaqhubi beembaleki abaphezulu kulo lonke eli bebeza kuqhuba le Mercedes-Benz, ngekhe bakwazi ukuqhuba ngokukhawuleza kunoNick. ”
"Ilungile." USylvia wanikina intloko kancinci. Ujonge kumgca wokuqala womdlalo watsho ngokucacileyo. Ndiyamthemba. ”
Amagama azithembileyo enza uYan noHan baginya into abaza kuyithetha.
Xa uSylvia wathi igama "ukuzithemba", wayegcwele inkolelo yokuba angaphumelela. Wayethembele kangakanani kuloo ndoda ukuba angayihlakulela imvakalelo enjalo?
Ukuba babuze uSylvia lo mbuzo, ngekhe akwazi ukuwuphendula. Wayesazi nje ukuba le ndoda ayizange imlahle. Uya kuhlala egqibelele nangawuphi na umcimbi omncinci.
UHenry wayehleli emotweni wajonga itreyini ephambi kwakhe. Wayengazange abandakanyeke kumdyarho, kwaye nelayisensi yakhe yokuqhuba yenziwa ngabanye ngaphambili. Nangona kunjalo, wayesakhumbula ukuba okokuqala xa wayeqhuba, wayephumelele imijukujelwa emininzi ekhokelwa kwaye walwa indlela yakhe ukuphuma kulwandle lwegazi.
Ezi moto zimbini, zipake kumgca wokuqala webala, zazibhadula phantse ngaxeshanye, amatayala abo ebhabha emhlabeni, ebeka umsi, kwaye esongeza ubushushu kwindawo ephezulu.
Intombazana encinci enxibe isuti e-sexy, ephethe uphawu lwe-LED ene-countdown ukuya kwisithathu, yema phakathi kwezi moto zimbini.
Inani elikwibhodi yokubonisa laqalisa ukutsibela laza latshintsha laba zibini. Ngalo lonke ixesha itshintsha, abantu ababebukele edabini babeziva benxunguphele.
UNick wabekekeka ecaleni ngamehlo ahlekisayo, kwaye wajonga amehlo akhe ngaphambili.
Xa inani litshintshile ukusuka kwelinye ukuya kwi-zero, ezi moto zimbini zaphuma ngokukhawuleza phantse ngexesha elinye. Emva kwemizuzwana emibini, i-GTR iqalile ukusebenza kwayo kwaye yandise umgama nge Mercedes-Benz. Umsantsa wokusebenza phakathi kwezi moto zimbini uboniswe ngokucacileyo kumgca othe ngqo.
I-GTR ibakhuphe ngokupheleleyo kwi-Mercedes-Benz ebomvu.
“Uphumelele u-Master Ning. Akunyanzelekanga ukuba sibukele kude kube sekupheleni konke konke. Singasathethi ke ngobu buchule, ukuthelekisa iimoto kwanele. ”
Kungekudala, uNick wayeziimitha ezingama-50 ngaphambi kukaHenry kumgca othe tye. Endleleni eyayiziikhilomitha ezingama-21 kuphela, iimitha ezingama-50 zazininzi. Ngapha koko, esi yayisisiqalo nje. Iijika eziqhubayo ngasemva ziya kuwandisa umsantsa, ngakumbi kwimoto yokubaleka eguqulweyo ukuze ukusebenza kwayo kube ngcono.
Xa ifika kwisaphetha sokuqala, uNick uye wadlula kuyo ngesingci esihle kakhulu.
Nditsho nabaqhubi bobuhlanga abaziingcali abanakufumana naziphi na iimpazamo kuyo kuba uNick wayeqhele kakhulu umkhondo.
Ngokubhekisele kuHenry, akazange asebenzise ubuchule bokuhambisa xa wawela idolo. Waqhuba kwicala elinye njengesiqhelo ukuze imoto ihambe igobe phakathi.
Enye yayisisiqhulo esihle phezu kwebhedi, kwaye enye yayiqhutywa ngendlela eqhelekileyo ngaphesheya, isenokuphawuleka ukuba yeyiphi ebingcono kwangoko!
“Hee, bendicinga ukuba le ndoda yakwa Lin izakusothusa. Ekugqibeleni, kuphela kwesibindi sakhe ukwamkela umceli mngeni ku-master Ning. ”
“Akanokwazi nokuqhuba kancinci. Yintoni injongo yokukhuphisana? ”
Ngaphandle kukaSylvia, uYan naye wancwina wathi, “Sylvia, kubonakala ngathi umyeni wakho uzokulahleka ngeli xesha, kodwa kuyinto eqhelekileyo. Umyeni wakho akananxibelelwano nalo msebenzi. UNick ungumphathi wayo. ”
UCarl wema ecaleni kwenkosikazi yakhe wajonga i-Mercedes-Benz ebomvu ebaleni. Wayethule, kodwa emehlweni akhe, kukho into engaqhelekanga.
UHan ujonge iMercedes-Benz ebaleni wathi ngelizwi eliphantsi, “Hayi, jonga, umyeni kaSylvia akacothisi kunoNick. Ngokwahlukileyo koko, ukhawuleza kamsinya! ”
Ayinguye kuphela uHan owayifumanayo le nto. Kwakukho nelizwi elinjalo kwabanye abantu.
“Umgama phakathi kweemoto ezimbini ubuncinci wawuyi-50 yeemitha, kodwa ngoku ufinyeziwe ukuya kwiimitha ezingama-45. Ukugoba ngakunye, umgama phakathi kweemoto ezimbini uzokwehla kakhulu. ”
“Ingenzeka njani le nto? Akanazo naziphi na izakhono zokukhukulisa konke konke. Angamfumana njani uMaster Ning? ”
Umfana owayemile kude neSylvia nabanye batsho ngothuka.
"Kukho isizathu esilula." UCarl, ebengakhange athethe nelimdaka, walungisa ikhola yakhe kwaye wehlisa ilizwi. “Oko kubizwa ngokuba kukukhukuliseka akukho nto ngaphandle kwesakhono esikhulu. Kutheni imoto iza kukhukuliseka? Ukunyaniseka, kungenxa yokuba isihlalo sangasemva semoto besingalawuleki, nto leyo ebangele ukuba ihambe. Xa imoto yayingalawuleki, ingaba yayihamba ngesantya esingakanani? I-GTR yenziwe ngokwezifiso kwaye ukufikelela kwesona santya siphezulu yi-1.2G, kodwa uNick wawela ibhendi ngokukhukuliseka, ngoku yafika kuphela kwi-0.5G. UHenry wayehlukile. Wawusebenzisa ngokupheleleyo umgama weMercedes-Benz wade waya kufikelela kwi-1G! ”
Amagama kaCarl atsala umdla wabantu abaninzi.
Uninzi lwabantu lwalusazi ukuba uCarl wayengumkhwenyana olilungu le-matrilocal, kodwa kwakungekho mntu wayelindele ukuba wayewazi umdyarho kakuhle kakhulu kwaye wayeyibona ngaphakathi ingxaki. Ngaba wayeyingcali?
UCarl wamjonga esithubeni.
U-Yan waqhwaba uCarl emqolo entloko wathi, “Thetha kakuhle, sukuzenza ngathi yingcali!”
UCarl wancuma wanqwala kaninzi. "Ewe Ewe."
Olu tshintsho ngequbuliso lwenza ukuba kube nzima kubantu ababangqongileyo ukuba bamkele, kodwa babeweva ngokucacileyo amazwi kaCarl. Ngaba kunokwenzeka ukuba ukugoba okucacileyo kwakukhawuleza kunokukhukuliseka?
Okwangoku, iimoto ezimbini ezisemgceni ziye zafikelela kwigophe eliqhubekayo, ezilithoba, emva koko, baya kungenisa amakhonkco amane. Umgca wokugqibela wawusembindini wesangqa. Kodwa ngokubanzi, amagophe asithoba athe tye yindawo egqibeleleyo. Ukuba ubungakhokelanga apho, bekungekho themba kuwe.
UNick waqhuba uthotho lweejika kwaye wakhukuliseka ngokujikajika kobunzima, nganye nganye ihamba kamnandi, ngathi ngumsebenzi wobugcisa, kodwa uHenry owayengazange enze nakuphi na ukubhoboka konke konke kwakusondela kakhulu.
Ngeli xesha, kumgangatho ophakamileyo wegumbi lokuzonwabisa leklabhu, indoda esele indala ime phambi kweefestile ezinkulu ezisemgangathweni ukuya eluphahleni zajonga iimoto ezimbini ezazisendleleni. “Iyamangalisa into yokuba umntu akwazi ukuqhuba iMercedes-Benz eqhelekileyo ukuza kuthi ga ngoku. Kuyamangalisa ngokwenene! Bendingalindelanga ukuba unenkosi engaka apha. ”
“Mfundisi, uthetha ukuthini?” Umfana wema emva kwale ndoda iphakathi ngobuso edidekile.
Eli tyendyana lalingumnini wale klabhu, uJacob wosapho lakwa Lou wayengafane uviwe kwiPhondo lase-Ning, kodwa emantla ntshona, yayilusapho olunamandla.
UJacob wayethanda imisebenzi yangaphandle. Phantse kuwo onke amaphondo asemantla ntshona, wayeneklabhu yabucala yolu hlobo, eyayingeyonzuzo kodwa eyenzelwe intlalo.
Indoda endala eyayiphambi kwakhe yayiyinkosi yokubaleka. Wayephumelele amabhaso okuqala amazwe amaninzi kwaye wayenobuchule obukhulu.
Baye babukela kunye imidlalo yemoto, enje nge-equation, umdlalo wokunyamezela, njlninzi, kodwa uJacob wayengazange ambone inkosi yakhe idumisa umntu onje.
Indoda esele ikhulile ikhombe umkhondo yathi, “Ndiyakhumbula ukuba bendinixelele ngelo xesha, ukuba kukho umda kwimoto nganye. Lo mda ngowona unzima ukulawula. Ukuba uye ngaphaya kwalo mda, iya kuyenza imoto ingalawuleki. Ukuba awunakho ukufikelela kulo mda, oko kungqina ukuba kusafuneka uhambe umdyarho. ”
Uye wanqwala ngentloko uJacob. Wawakhumbula amazwi enkosi yakhe, kwaye ngoku wayesebenzela kwicala lokulawula umda wesithuthi, kodwa kuphela emva kokuzama, waqonda ukuba kunzima kangakanani ukulawula.
Indoda esele ikhulile iqhubeke yathi, “Kunzima kakhulu ukuba umntu awuqonde umda weembaleki ngokuchaneka nokulungelelanisa, kungasathethwa ke ngemoto enkulu yoluntu. Akukho moto yoluntu engenza idatha ichaneke njengemoto yokubaleka. Kodwa idatha ayisoloko ichanekile njengoko ichaziwe kuqwalaselo. ”
Bhalisa kwi-Channel yethu
iindidi Inveli tags free, Inveli, INovelCat, PDF Post yokukhangela
Ukutshata kwiintsapho zakhe Isahluko 168 NovelCat Version
Ukutshata kwiintsapho zakhe Isahluko 170 NovelCat Version